You are here: Home somal Waraysi:-Tabababare Jaamac Karaaciin Oo Ka Sheekeeyey Qisada Shirqool Loogu Geystay Spain Iyo Xadhiggiisii
waddanka Spain wakhti uu ku sii socday waddanka Brazil oo koox uu watay ay kaga qayb-gelaysay ciyaarihii Olympics-ka ee Rio de Janeiro.
Jaamac Karaaciin oo hoggaaminaya ciyaartooyo ka socda waddanka Qatar, ayna wehelinayeen xulalka waddamo kale oo Carab ah, ayaa waxay sii mareen waddanka Spain oo ay ku degeen, iyagoo ay u qorshaysnayd in ay u sii dhaafaan Brazil, laakiin ciidamo boolis ah ayaa soo weeraray Hotelkii uu degenaa, kuwaas oo baadhitaano ay sameeyeen kaddib xabsiga u taxaabay Tababare Jaamac Karaaciin oo xidhnaa muddo gaaban, markaas kaddibna ka qaaday baasaboorka, iyagoo ku sababeeyey in ay baadhitaan ku hayaan. Arrintan ayaa sababtay in Jaamac Karaaciin aanu tegin waddanka Brazil.
Jaamac Karaaciin ayaa waraysi uu siiyey idaacadda BBC, isaga oo ku sugan magaalada Hargeysa, waxa uu ku tilmaamay in ay ahayd shirqool laga sii shaqeeyey, waxaanu yidhi: “Si aan dadka ugu caddeeyo arrintii ka dhacday waddanka Spain magaalada Sabadell wakhtigii lagu jiray diyaar-garowga olambiggii lagu qabanayey Rio de Janeiro, waxay ahayd shirqool laga sii shaqeeyey.” Sidaas ayuu yidhi Jaamac Karaaciin.
Tababarahan Caanka ka ah dunidu waxa uu sheegay in shirqoolkan la maleegay markii uu guulo waaweyn ka soo hooyey tartamada kala duwan ee ciyaaraha fudud, iyadoo sabab laga dhigtay in ciyaaryahannada uu tababaraha u yahay ay suurtogal tahay inay isticmaalaan daawooyinka kordhiya awoodda jidhka.
Mar la weydiiyey in uu magdhow dalbaday markii waxba lagu waayey, waxa uu xusay in uu qareenkiisa kala hadlay in dacwad ay ku oogaan qolada shirqoolka ka shaqaysay, laakiin ay wali ku andacoonayaan in ay baadhitaan wadaan, marka ay soo gebo-gabeeyaanna uu qaadi doono tallaabo sharci ah oo uu magdhow ku dalban doono, maadaama sumcad dil loo geystay, tartan caalami ahna laga reebay.